China Architectural kpara ntupu eji maka Building Facade Cladding factory na suppliers | Okechukwu
Architectural kpara ntupu eji maka Building Facade Cladding
Ji achọ metal ntupu na-akpa n'ime a dịgasị iche iche nke pụrụ iche nakawa etu esi, na nwere uru nke n'ụzọ dị ịrịba ama vasatail, ala mmezi ewu, ume arụmọrụ na ihe nkwado.
Architectural kpara ntupu na iche iche ikpa na Visual Forms
Architectural kpara ntupu na-akpọ ji achọ kpara waya ntupu ma ọ bụ kpara waya ntupu. Ohaneze, enwere ike ịkwanye ya n'ụkpụrụ dị iche iche pụrụ iche. Na ụfọdụ kpara ụdị ka kpara waya ntupu ka ụkpụrụ ụlọ USB ntupu ma ọ bụ ụkpụrụ ụlọ ebu eriri. Na mara mma na agba, fashionable ihe nakawa etu esi, nkenke style, ezi ọrụ, anyị ụkpụrụ ụlọ kpara ntupu emeela site ọzọ na ndị ọzọ na-emepụta na-atụpụta ụkpụrụ eji dị ka ime na mputa mma. Dị ka ndị na-ekewa mbara igwe, steepụ balustrades, mgbidi na-ekpuchi ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ndị ọzọ pụrụ iche.
Waya + mkpara ji achọ ntupu.
Metal kpara waya dị ka ohere divider.
Ihe: igwe anaghị agba nchara, galvanized ígwè, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla, aluminum, aluminum alloy, wdg
Weave ụdị: larịị kpaa, twill ikpa, Dutch kpaa, larịị Dutch ịkpa, Twill Dutch ikpa, pụrụ iche kpara usoro, wdg
Ọgwụgwọ: galvanized, anodized, zinc coated, wdg.
Agba: mbụ ọla agba ma ọ bụ ịgba n'ime agba ndị ọzọ.
Enwere ike iji ntupu waya a maka ọtụtụ ngwa na ihe ndị a atụmatụ:
Architecturally mmụọ nsọ;
Ọtụtụ oghere na nha;
Designdị na ọdịdị pụrụ iche;
Style na arụmọrụ.
Na otutu ọrụ na aesthetic mkpesa, na kpara waya ntupu adabara dị iche iche ngwa.
Ọrụ: ndị na-ekewa ụlọ, ihe ịchọ mma ụlọ, ọchọmma mgbidi, ikpe ụzọ, windo windo, ihe mkpuchi windo, ákwà ngebichi, mkpuchi ọkụ, nkewa ọkụ, balustrades, steepụ nkewapụ iche, elevator cabins screen, ụlọ ahịa ihe ngosi, ogwe ụlọ, ogwe aka, kabinet ogwe, ụlọ facade, kọlụm cladding, nka oru, wdg
Ngwa ebe: mbara ihu, corridor, overpass, mbuli elu, ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ ọrụ, ụlọ, nnukwu ụlọ egwu, ebe a na-edebe ihe ngosi nka, ụlọ nzukọ egwu, ebe a na-eri nri, ụlọ ngosi ihe ngosi, ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, ebe ihe nkiri, wdg.
Ngwongwo igwe eji eme ihe dika onye na-ekewa ulo.
Metal kpara waya dị ka ụlọ mgbidi.
N'uko ji achọ waya ntupu.
Ike ntupu dị ka ụlọ facade.
Metal ike ntupu ụlọ cladding.
Gburugburu ike ntupu ụlọ facade.
Architecture kpara ntupu n'omume.
Nke gara aga: Ngwongwo igwe eji eme ihe maka imepụta ihe eji eme ihe
Osote: Ebu eriri ntupu Kwesịrị ekwesị maka Building Facade na Cladding.
Perforated Metal ihuenyo maka Building N'uko
Ji achọ ntupu maka Building Cladding
Chain Link Curtain Nọgidere Na-efe Ahụhụ Ahụhụ Bu ...